Epreli 4 I-Zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-4 ka-Epreli i-Zodiac yi-Aries-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Nge-4 ka-Epreli i-Zodiac yi-Aries-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Uphawu lwe-zodiac ngo-Epreli 4 ziiAries.
Uphawu lweenkwenkwezi: Ram. Oku kunxulumene nomntu owomeleleyo ohlala ethatha inyathelo ngokukhawuleza. Le yi uphawu lwabantu abazalwa phakathi kuka-Matshi 21 no-Epreli 19 xa iLanga likwimpawu yeAries zodiac.
Inkqubo ye- Iqela le-Aries ngeenkwenkwezi eziqaqambe kakhulu ngokuba yiAlfa, iBeta kunye neGamma Arietis zisasazeke kwii-441 sq degrees phakathi kwePisces ukuya eNtshona naseTaurus ukuya eMpuma. Ububanzi bayo obubonakalayo buyi-90 ° ukuya -60 °, le yenye yeenkwenkwezi ezilishumi elinambini zodiacac.
Igama elithi Aries livela kwigama lesiLatin likaRam. Eli lelona gama liqhelekileyo lisetyenzisiweyo ukuchaza uphawu lwe-zodiac lwango-Epreli 4 uphawu lwe-zodiac, nangona kunjalo ngesiGrike bayibiza ngokuba yiKriya nakwiFrench Bélier.
Uphawu olwahlukileyo: iLibra. Olu luphawu ngqo ngqo kwisangqa se-zodiac ukusuka kumqondiso we-Aries zodiac. Iphakamisa ukudibana kunye ne-naivety kwaye ezi zimbini zithathwa njengezenza ubudlelwane obukhulu.
Isimo sokuziphatha: Ikhadinali. Le modality ibonisa imeko yemozulu yabo bazalwa ngo-Epreli 4 kunye nobuhle babo kunye nokonwaba kumava amaninzi obomi.
Indlu elawulayo: Indlu yokuqala . Le ndlu ilawula izinto ezintsha, inyathelo kunye nokuzimela. Ikwayindlu yokwenyuka, okwesibini ngokubaluleka emva komqondiso we-zodiac.
Umzimba olawulayo: EyoKwindla . Lo mzimba wasezulwini kuthiwa uphembelela amandla kunye nobumnandi obuthile. IMars glyph luphawu oluguqulweyo lweVenus, uMars ungamandla obudoda aphikisana nobufazi. UMars ukwacebisa ngesibindi kubomi baba bantu.
Isiqalelo: Umlilo . Eli lilungu labo balandela ngokuzithemba izicwangciso zabo kwaye bayakhawuleza ukuveza imeko yabo yomlilo. Isebenza ukuze kuzuze abo bazalwe phantsi kwe-4 ka-Epreli ye-zodiac.
Usuku lwethamsanqa: uLwesibini . Olu lusuku olulawulwa yiMars, ke ngoko luphawu lothando nobungqongqo kwaye luchonga ngcono abemi baseAries abanamandla.
Amanani anethamsanqa: 5, 8, 12, 19, 29.
Ulwazi oluthe kratya ngo-Epreli 4 Zodiac ngezantsi ▼
Ngomhla we-19 ku-Matshi iZodiac ziiPisces-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
loluphi uphawu ngo-Epreli-21
abantu abazalwe ngo februwari 7
I-gemini yindoda kunye ne-aries yabasetyhini
aries yabasetyhini gemini ukuhambelana kwendoda